သူတို႔အတြဲေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ ခဏခဏ ရန္ျဖစ္ၾကရတာလဲ💖 💘 … – Askstyle
ကိုယ့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင် ခဏခဏ ရန်ဖြစ်တတ်ကြတဲ့သူတွေကို မြင်တွေ့ဖူးမှာပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ရော သင်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ မကြာခဏဆိုသလို ရန်ဖြစ်တတ်ပါသလား ။ ရန်ဖြစ်ပြီး ပြန်ချစ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် မကြာခဏရန်ဖြစ်လွန်းလျှင်တော့ သင်တို့နှစ်ယောက်အတွက် ရေရှည်မှာ မကောင်းနိုင်ပါဘူး ။ အခု ရန်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းအများစုကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်နော်..
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုမရှိဘဲ ဘယ်လိုမှ ရေရှည်အဆင်မပြေနိင်ပါဘူး ။ ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းကြောင့် နေရာတကာမှာ သံသယတွေဝင်ကာ စွတ်စွဲမှုတွေရှိလာသလို စွပ်စွဲခံရသူအဖို့လည်း စိတ်မချမ်းမြေ့စရာပါပဲ ။ ရေရှည်တည်မြဲတဲ့ ဆက်ဆံရေးအတွက် ယုံကြည်မှု ခိုင်မာမှ ရှေ့ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါဟာလည်း အဓိကကျတဲ့ အချက်ပါပဲ ။ မိဘနှင့်သားသမီး ဆက်ဆံရေး ၊ သူငယ်ချင်းဆက်ဆံရေး ၊လုပ်ငန်းခွင် ဆက်ဆံရေး ၊ နောက်ဆုံး သမီးရည်းစား ၊ လင်မယား ဆက်ဆံရေးအထိ နားလည်မှုမရှိဘဲ အဆင်ကိုမပြေနိုင်ပါဘူး ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လျှော့သင့်တာလျှော့ ၊ တင်းသင့်တာတင်း balance ညီတဲ့ ဆက်ဆံရေးကသာ ရေရှည်တည်မြဲစေမှာပါ ။
ချစ်သူရည်းစားတိုင်း သဝန်တိုတတ်ကြပါတယ် ။ ချစ်လို့ သဝန်တိုတယ်ဟု ထင်ရသော်လည်း အလွန်အမင်း သဝန်တိုလာပြီဆိုရင်တော့ ဒါဟာ မယုံကြည်မှုပါ ။ သဝန်တိုပါ ။ သို့သော် ချစ်စရာကောင်းအောင် သဝန်တိုပေးပါ။ စိတ်ပျက်သွားလောက်အောင်ထိ သဝန်မကြောင်ပါနဲ့ ။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အချိန်မပေးနိုင်လို့ ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာက တကယ်တော့ နှစ်ဦးသား နားလည်မှု ယူရမယ့် ကိစ္စပါ ။ ချစ်သူနှစ်ဦး အမြဲတမ်းပူးကပ်ပြီး တချိန်လုံး တွေ့ချင်နေလို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ချစ်တဲ့သူနားမှာ အမြဲရှိနေချင်တတ်တဲ့ စိတ်ကိုနားလည်နိုင်ပေမယ့် ဘဝအတွက် အခြားအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေကိုလည်း ပစ်ပယ်ထားလို့မရပါဘူး ။ လူမှုရေးကိစ္စ ၊ သာရေး ၊နာရေး ၊ အလုပ်ကိစ္စတွေလည်း ရှိနိုင်တာကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ညှိနှိုင်းထားဖို့တော့ လိုပါတယ်။
ချစ်သူရယ် ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဘာမာန်မာနမှ ထားစရာမလိုပါဘူး ။ တကယ်ချစ်ပြီဆိုရင် မာနဆိုတာလည်း အဝေးမှာပါ ။ မလိုအပ်တဲ့ မာနတွေကြောင့် ရန်ဖြစ်ချိန်တွေဟာ မကြာသင့်ဘဲကြာ ၊ မရှည်သင့်ဘဲရှည် တတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး လမ်းခွဲကြတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
အဓိကအနေနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုများများပေးပြီး ယုံကြည်မှုခိုင်မြဲနေမယ်ဆိုရင် တွဲလက်တွေ မြဲနေပြီး စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့ relationship ကို ပိုင်ဆိုင်မှာပါနော်.
ေယာက္်ားေလး ေတြ တကယ္ခ်စ္ရင္ ဒီအခ်က္ေတြကိုေတာ့ မျဖစ္မေနလုိက္နာတတ္ၾကတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အခ်စ္ကိုမေကာင္းဘူးေျပာၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အခ်စ္မရွိရင္ လည္း မေနႏိုင္ၾကျပန္ဘူး။ တကယ္ေတာ့ အခ်စ္ဆိုတာ ဘယ္ရထားပဲလာလာ အားလံုးနားခိုလို႔ရေအာင္…
ခ်စ္သူေတြၾကား မလုပ္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား... 1. ဖုန္း screen မွာ ခ်စ္သူနဲ႔ပံုကို တင္ထားျပီး တျခား အျပင္သြားတဲ့အခါ ကိုယ့္ပံုကို ျပန္ေျပာင္းျခင္း (အစကထဲက မတင္ခ်င္ မတင္နဲ႔ေပါ့)…
စြန္႔စြန္႔စားစား ဧ၀ရတ္ေတာင္မွာ မဂၤလာပြဲက်င္းပခဲ့ၾကတဲ့စံုတြဲ…
စြန္႔စြန္႔စားစား ဧ၀ရတ္ေတာင္မွာ မဂၤလာပြဲက်င္းပခဲ့ၾကတဲ့စံုတြဲ... ခ်စ္သူစံုတြဲတုိင္းက သူတို႔ရဲ႕မဂၤလာပြဲေန႔ေလးကိုတျခားလူေတြနဲ႔မတူ ထူးထူးျခားျခားနဲ႔အမွတ္တရေလးျဖစ္ဖုိ႔ကို စဥ္းစားၾကပါတယ္။ ဒီထဲကမွ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံသားစံုတြဲက သူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕အခ်စ္ကိုဧ၀ရတ္ေတာင္ေပၚမွာသက္ေသထူဖုိ႔စြန္႔စားခဲ့ၾကပါတယ္။ အဆိုပါစံုတြဲကေတာ့ အသက္(၃၂)ႏွစ္အရြယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ိဳးသမီးျဖစ္တဲ့ Heidi Turunen နဲ႔…
အိေခ်ာပို ကိုယ္တိုင္ေျပာတဲ့ သူမရဲ႕ အက်င့္ဆိုးေလးေတြ အေၾကာင္း…